U-Obelix kunye no-Asterix bafikelela kwiminyaka ye-50 - i-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukubhiyozelwa kweminyaka yamahlaya ye-50 kufikelele kwikhava kaGoogle, oyilo lwayo lwenze uhlengahlengiso olukhulu lwento engasayi kubakho kwezi kopi. Ukubhiyozela, kuye kwakho uguqulelo olungashicilelwanga lwamaphepha e-57 kubandakanya iziqendu ezifutshane.
Kwaye, owayengenayo ikopi ezandleni zakhe kwaye eyonwabele isiqingatha seyure ukubukela umlo ngamnye wokulwa ophakathi komntu omnyama nomthengisi weentlanzi kwilali encinci eGaul; Uninzi luzele ukuzigcina njengeengqokelela zemiqoko kuba nganye yezi ziqendu yimisebenzi yokwenyani. Ukuza kuthi ga ngoku ndilwa nabantwana bam ababakhupha esiqwini kwaye ndifuna ukubanika unyango olunokuba loluphi na omnye umdlalo ohlekisayo onokuba nalo, ukuba kukho abalunge kakhulu kodwa kuxhomekeka kumhla bahlafuna okokuqala, vusa imvakalelo ye i-nostalgia kunye nokunyaniseka kokubulela kwinkqubo yayo eqhubekayo kwiinguqulelo ze-34.
Ngolu hlobo ndiyithanda kakhulu i-comic yaseBelgian ipolishi "Tintin", yimfesane ekunzima ukuyifumana kwaye emva kokuba inguqulelo leyo betyelele kuCentral America kunye nokubuya kwabo emkhosini andikwazanga kufumana enye. Kwimeko ka-Obelix, ukudibanisa okungekho ngqiqweni kunye nebali ngendlela evuthayo kunye nomgangatho ophezulu wegraphic wenza iimeko eziphindayo zibe mnandi. Abalinganiswa bambalwa kwaye benza phantse okufanayo:
Imvumi eludlolo ihlala ibopha ekugqibeleni
U-Obelix uhlala elambele iihagu zasendle
Mnyama yam kwinqanawa yepirate ... bahlala besenza kakubi
I-Tortados kunye neekeyiki ezingakumbi eziya kwabaseRoma
Amagama anje: "la maRoma ayaphambana", "uwele embizeni", "NguTutatis!", UXinekile.
Kodwa kuyenzeka ukuba imvelaphi yeskripthi kunye nomgangatho kwinkcazo yabalinganiswa, indawo, amagama kunye nemeko yezembali kufanelekile ukunconywa, nangona kuvunywa ukuba abalinganiswa bafunyanwa nguGoscinny ngelixa befunda eArgentina besuka ePatoruzú nase Upa, bendalo. IGaucho Ngawona mabali afanayo, mdala ngeminyaka ye-50 ubudala; Besaonwabisa, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokufikelela kwimidlalo edanyazayo kunye neemovie (ezingandithandiyo ngendlela).
Ke kubhabho, ezinye izinto ezixabisekileyo endizikhumbulayo:
Xa betyelele ilizwekazi laseMelika neeViking, iglu-glu kunye nomIndiya ekhalaza ngelithi amnike iPaf!
Xa impumlo ye-sphinx yaphukile
Xa u-Obelix emisela inkampani ye-Menhires. Eli nqaku liphela liyimbali yokuthengisa eyinyani, ndiyakhumbula ndiyibona njengencwadi kwisifundo sentengiso.
Xa amaRoma aba neenwele zempazamo yomlingo
Xa bebhiyozela umhla wokuzalwa kwepirate ngesausage
Kulo iphepha elisemthethweni Izixhobo zemidlalo, uphononongo kunye nolwazi oluninzi kunokufumaneka. Phakathi kwazo olu luhlu lugqibeleleyo loluhlelo:
Izulu liwa kuthi!
I-Asterix kwimidlalo yeOlimpiki
I-Asterix kunye neCleopatra
I-Asterix kunye neCauldron
I-Asterix kunye neLatraviata
I-Asterix kunye nokungazange kubonwe
I-Asterix kunye neeGoth
I-Asterix kunye namaNorman
Isikhumbuzo seAstérix kunye no-Obélix-Incwadi yeGolide
Isiselo esibi se-Obélix
I-Rose kunye Nekrele
U-Obelix kunye neNkampani
Post edlulileyo«Edlulileyo Indlela yokuphucula isantya se-Intanethi
Post Next Indlela yokusebenza kumda weendawo ezimbini ze-UTMOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 eziya ku-"Obasti kunye no-Asterix bafikelela kwiminyaka ye-50"
... obu bumbano ... geo geek kunye ne asterix firki. hahaha
Ndiyavuya Ziqokelelo ezilungileyo, ezinqamleza ezizukulwaneni.
Enkosi Borja, sele ndigqibile ukulungisa. Inene, yile nto ndiyithetha.
Ukuba uthetha ukuba nguTintin de Hergé (lowo weMilú puppy), ikomityi yiBelgian hayi iPoland.